Fitaizana skoto : haseho amin’ny sarimihetsika ny tantaran’i Baden Powell | NewsMada
Fitaizana skoto : haseho amin’ny sarimihetsika ny tantaran’i Baden Powell
Homarihin’ny eo anivon’ny skoto ny tontolo andron’ny mpamorona na ny Founder’s day. Hotanterahina etsy amin’ny tranom-pokonolona Analakely izany ny alarobia 22 febroary ho avy izao, amin’ny alalan’ny fampisehoana sarimihetsika maneho ny tantaram-piainan’i Baden Powell, nanorina ny skoto. Misahana ny fikarakarana izany ny eo anivon’ny foibe sy ny departemanta fanabeazana eto anivon’ny Tily ary hanasan’izy ireo ny Fanilo, Mpanazava, Antily ary Kiadin’i Madagasikara.
Hizara roa ny fampisehoana ka hatokana ho an’ireo beazina ny fidirana voalohany amin’ny 2 ora. Ho an’ny mpanabe sy ny sakaiza kosa ny fidirana faharoa, amin’ny 4 ora.
Manam-bahiny ny skoto eto amintsika
Ankoatra izany, hisy fifaninanana « Kopy Kolé » Baden Powell. Eo koa ny fifaninanana Selfie ka alefa @ hastag: #foundersday #22Feb #TEM. Manampy izany, hisy ny varotra fampirantiana iarahana ahitana ireo marika samihafa vokarin’ny foibe Tily, amidy amin’ny vidiny mirary: boky, pin’s, insigne, sns. Manentana ny rehetra liana momba izany ankoatra ireo efa eo anivon’ny skoto ny mpikarakara ny hetsika mba ho tonga maro.
Tsiahivina fa efa nigadona, omaly eto amintsika ireo skoto koeranina tatsimo mirahalahy, miaraka amin’ny solontena roa avy amin’ny governemanta any amin’izy ireo. Eo koa ny avy amin’ny masoivoho ho an’ny fampandrosoana avy any Korea. “Hampahafantatra ny “Jamboree 2023 hatao any Korea Atsimo ary hamaritra tetikasa fiaraha-miombona antoka ho an’ny tanora izy ireo”, hoy ny fanambarana. Haharitra iray andro izao fitsidihana sy fandalovan’ireto vahiny ireto eto amintsika.